Banyere Anyị - Tianse
adịgide adịgide Machines
Guangzhou Sanheng Ozi Technology Co., Ltd. Dị ka otu n'ime ụwa ọkachamara emeputa na widest nso nke na ngwa nbipute consumables na ụlọ ọrụ na-enye, anyị na-akwa mpako na-eke ndị kasị ọhụrụ na ọtọ ngwaahịa. Office mkpa buru ibu ma na anyị na-agba mbọ iji nzute, ha nile.
TIANSE bụ isi ika nke ụlọ ọrụ na-enye n'okpuru ọkọlọtọ nke Guangzhou Sanheng Ozi Technology Co., Ltd. Ọ na atụmatụ na-eri-irè, otutu imewe, ọgaranya na agba na iche iche nhọrọ. TIANSE ika eze banyere ahịa ebe ọ bụ na 2014, bụ ọkachamara ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ consumables, nke na-ere na Tmall.com, JD.com na ndị ọzọ na e-azụmahịa nyiwe. Ọ ngwa ngwa ibu a họọrọ ebi akwụkwọ consumables soplaya brand na anụ ụlọ e-azụmahịa ahịa.
Na a mmepụta isi ekpuchi 35,000 square mita Huizhou, ise nnukwu n'ụlọ nkwakọba na China na ngụkọta nkwakọba ohere ruo 10,000 square mita, 193 ọkachamara ahịa ọrụ ebe a na ihe karịrị 2,300 ekwenye outlets mba, ụlọ ọrụ nwere ike ekwe nkwa na ngwa ngwa na n'oge nnyefe na-enye ndị ahịa na ọkachamara na-echebara mgbe-sales ọrụ, n'ezie ifiọkde onye-nkwụsị ọrụ.
Strong R & D Ike
Na a ọkachamara R & D otu, anyị na-itinye oké mkpa iji ọhụrụ na imewe. Anyị kpọrọ ihe echiche na-agbalị ka innovations na ndozi na anyị na.
Na ọgaranya ụlọ ọrụ ahụmahụ na iwu siri ike àgwà akara usoro, anyị na-elekwasị anya na ihe anyị na-eme ma na-eme kwesiri onwe ha nkwa iji hụ ahịa anyị na-enweta ndị kasị mma na ngwaahịa.
Na anụ ọkọnọ ígwè, ndị ahịa na-agba mbọ echiche na a ọkachamara ahịa ọrụ otu, anyị na-enye ihe niile na-gburugburu ma na-echebara tupu ire ere, na-ere ya ere na mgbe-ire ọrụ anyị niile ahịa niile.